Umthetho wetyala | Law & More B.V.
Zininzi iimeko apho umthetho wetyala udlala indima. Cinga, umzekelo, ngemeko apho umqeshwa wonzakala engozini kwimeko okanye ngexesha lokusebenza. Kwiimeko ezinjalo, ngamanye amaxesha umqeshi unokubekwa ityala ngokusemthethweni kumqeshwa ngenxa yomonakalo owenzekileyo.
NDIFUNA NAMANYE UMTHETHO WOKUHLAZIYA?
Zininzi iimeko apho umthetho wetyala udlala indima. Cinga, umzekelo, ngemeko apho umqeshwa wonzakala engozini kwimeko okanye ngexesha lokusebenza. Kwiimeko ezinjalo, ngamanye amaxesha umqeshi unokubekwa ityala ngokusemthethweni kumqeshwa ngenxa yomonakalo owenzekileyo. Ngamanye amaxesha, abavelisi banokuba netyala. Le yimeko xa umthengi enomonakalo kwaye kufunyaniswa ukuba umonakalo ubangelwe sisiphene kwimveliso. Kwakhona, umlawuli wenkampani unokufumana uxanduva lobucala ukongeza okanye endaweni yenkampani.
> Uxanduva lomqeshi
> Uxanduva kwimveliso
> Uxanduva lomlawuli
> Uxanduva olusekwe kwisiphoso
> Uxanduva lobuchule
Ngaba ubenetyala okanye ufuna ukubamba umntu onetyala? Abameli betyala elivela Law & More Uya kukuvuyela ukukunika inkxaso yomthetho.
Imizekelo yezifundo esinokukunceda:
• Uxanduva loMlawuli;
• Uxanduva olungqongqo;
Uxanduva olusekwe kwisiphoso;
Ukuba umsebenzi wehlelwe yingozi ngexesha okanye enxulumene nokusebenza komsebenzi wakhe, umqeshi unakho ukuba ubenetyala ngokusemthethweni kumqeshwa ngomonakalo owenzekileyo. Kungenxa yokuba umqeshi unesibophelelo esikhethekileyo sokukhathalela xa umsebenzi usenziwa. Unoxanduva lomonakalo owonzakaliswe ngumqeshwa ngelixa esenza umsebenzi wakhe, ngaphandle kokuba angabonisa ukuba usifezekisile isibophelelo sakhe sokukhathalelwa. Ukuba umqeshi angabonisa ukuba uthathe onke amanyathelo afanelekileyo ukuthintela ingozi, akanoxanduva. Kwimeko apho umqeshwa athe wabangwa ngabom okanye ngabom, umqeshi akanakubekwa tyala. Sijonga zonke iinyani kunye neemeko kwaye siya konwaba kukunceda ukuba uxanduva lwakho njengomqeshi okanye ukuba ufuna ukubamba umqeshi wakho unoxanduva lomonakalo owonzakeleyo.
Ngaba ujongene nebango lomonakalo kwaye ungaluthanda uncedo lwezomthetho kwinkqubo?
Xa uthenge imveliso, ulindele ukuba ibe yomelele. Awulindelanga ukuba ukusetyenziswa kwayo kukwenzakalise. Ngelishwa, oku kusenokwenzeka. Unokucinga ngomonakalo obangelwa ngumatshini onesiphene, ukutya kunye nezinye iimveliso zabathengi.
Umenzi uxanduva ngokusemthethweni ngomonakalo xa kungqinwa ukuba umonakalo ubangelwe sisiphene kwimveliso. Imveliso ithathwa njengento enesiphene ukuba ayizukubonelela ngokhuseleko obulindele kuyo. Ukuba ukhubazekile ngenxa yemveliso enesiphene, siya konwaba kukubonelela ngenkxaso yomthetho.
Ngokomgaqo, inkampani inoxanduva lwamatyala afunyenwe. Nangona kunjalo, umlawuli wenkampani unokufumana uxanduva lobucala ukongeza okanye endaweni yenkampani. Umlawuli unyanzelekile ukuba enze imisebenzi yakhe ngokufanelekileyo. Ukuba ubanjiwe njengomlawuli wequmrhu elisemthethweni, iziphumo zinokubakho. Law & More inceda abalawuli abajongane okanye boyikise ngezityholo zetyala. Sikwanceda amaqela afuna ukubamba umlawuli uxanduva ngokusemthethweni.
Uxanduva olusekwe kwisiphoso
Olu hlobo lwetyala lusekwe kwimpazamo okanye ukungakhathali. Ukuba wenzakele emtshatweni, singakuvuyela ukukunceda ubambe umntu owenze lo monakalo uxanduva ngokusemthethweni. Unokuqhakamshelana nathi ngenkxaso yomthetho ukuba ubanjiwe ngomnye umntu ngenxa yomonakalo.
Xa umntu oqeqeshiweyo ozisebenzelayo, njengogqirha, umphicothi zincwadi zemali okanye esenza umvumisi, esenza impazamo yobuchule, unokubekwa ityala ngokusemthethweni kubaxhasi okanye kwizigulana. Kodwa kukweziphi iimeko apho imeko yokuziphatha gwenxa egwenxa yenzeka khona? Lo ngumbuzo onzima. Impendulo ixhomekeke kuzo zonke iinyani kunye neemeko zetyala.
Ukuba uyingcaphephe ekuziqhelanisa nayo kwaye unoxanduva lokujoka ngempazamo, siyakuvuyela ukukunceda.